GEEDKA JILICSAN: NOOCYO GEEDO CAAN AH OO CAAN AH - CHERRY
Iskuday cherry - koritaanka geed baadiyaha ah oo gaadhaya laba mitir oo dherer ah. Waxay leedahay caleemo ballaaran oo dhaadheer leh ama yar yar, caleemaha qoyan iyo caleemaha gaduudan oo casaan ah oo ku dhegsan laanta ku wareegsan. Geedka geedkani sidoo kale wuxuu u adkaystaa cayayaanka iyo cudurada, inkastoo, sida noocyo badan oo kale, waxay u nugul yihiin weerarrada kookaha.
Marka aad dooranayso darajo ku haboon ee cherry dareemay, bannaanka u badan door bidaa doorashooyinka soo socda.
Haddii aad door bidayso noocyada kala duwan, ka dib waxaad u maleyneysaa inaad mustaqbalka ogaato in mustaqbalka aad ka heli doonto berry guduudan oo ballaaran, ballaca kaas oo gaari kara 4 g. Waxay leeyihiin dhumuc dhadhan leh, dhadhan casri ah oo macaan, oo koriimada ugu badan ee kaas oo dhacaya qeybta labaad ee bisha July. Maqaarka berry waa mid khafiif ah oo aan laga soocin saxarka. Midhaha noocan oo kale ah waxay ku habboon tahay isticmaalka cusub iyo samaynta macaanka, casiir ama xitaa khamri.
Nolosha nololeed ee lafaha "Spark" badanaa waa 14 sano, illaa iyo wakhtigaas wuxuu gaadhaa in ka badan laba mitir oo dherer ah iyo 2.8 m width in width (size size). Laamiyaal badani waxay leeyihiin madow midab madow oo lagu gartaa jilif dillaacsan, halka caleemaha sanadlaha ahi yihiin midab madow. Burooyinkeeda yaryar ayaa si adag loola jeeda caleemaha, iyo nuqulladoodii miro waxay aasaaseen caleemaha sannadlaha ah ee sanadlaha ah, iyo sidoo kale digaagga dhirta gaaban iyo bouquet (ilaa 5 cm).
Geedka johannesört waxaa ka muuqda noocyo badan oo xiiso leh, oo ka mid ah "Alice" ma aha meel ugu dambaysa, oo leh sharaxaad raaxo leh. Tani waa geedo hooseeya oo dhererkeedu yahay 2 m oo dherer leh, oo leh midab, cufan cufan. Wareegyada dilka ah ee geedka ayaa toos u ah, oo qaro weyn leh, midab leh oo cufan leh, oo ay ku xiran yihiin farirro nuuro badan. Caleemaha sannadlaha ah ee caleemaha, yar yar, lafdhabarro, yaryar, fiiqan, ka sameysma kooxo saddex ah (isudheellit ah, dhir caadi ah). Dhammaantood way yar yihiin, waxayna ka diideen baxsashada. Cagaar mugdi ah, caleemo qulqulo-qoyan ah ayaa leh gees xaraarad leh waxaana lagu kala soocayaa dusha sare, daaqada daaqada.
The berry ah ee warshad this, sida caleemaha, leeyihiin leeyihiin pubescence daciif ah, yihiin maroon midab leh iyo gaari tiro ah 3 g. Jirka waa casiir leh, dhadhanka waa wax yar acidic, laakiin guud ahaan waxay leedahay sifooyinka nafaqada wanaagsan. Dhirta yar yar, fruiting wuxuu ku bilaabmaa 3-4 sano ka dib marka la beero, laakiin waa in lagu dhajiyaa maskaxda in tani ay tahay noocyo is-kiniin ah, taas oo macnaheedu yahay in loo baahan yahay in lagu dhex daro noocyo kale oo ah jeeriga. "Alice" waxaa lagu magacaabaa noocyo kala duwan, taniyo waqtiga goosashada waa dhammaadka July. Wadarta guud ee geedku waa 17 sano.
Kala duwanaanshaha "Tsarevna" ayaa iska leh dhirta hooseeysa, sababtoo ah waxay gaareysaa 1.5 m oo dherer ah. Taajku waa mid ballaaran oo loo yaqaan "oval-oval" waxaana lagu gartaa cufnaanta dhexdhexaadka ah. Qaybta ugu muhiimsan ee laamiyada - waa qaybo xooggan, qaybo toosan oo dhirta leh jilif khafiif ah oo jilicsan. Caleemaha ayaa yar yar oo guduudan oo yar yarna ah.
Caleemaha cagaaran ee madow waa muuqaal yar oo qoyan, oo leh qaabab fiiqan iyo dushooda. Waxay sidoo kale leeyihiin barxad yar oo yar, oo ay ku dhammaanayaan ilkaha, oo ay leeyihiin astaamaha gaaban. Ubaxa "Tsarevna" qiyaas dhexdhexaad ah, caddaan ahna ku koraan 2-3 qaybood oo isku mid ah inflorescence. Waxa ay kala soocaan saameyn heer sare ah oo lagu qurxiyo, tan iyo inta lagu jiro xilliga ubaxa ee baadiyaha waxay si buuxda u daboolaan laantiisa.
Markaad sharraxayso noocyo kala duwan, waa suurtogal in la iska indha tirto berry, taas oo ah mid kasta oo la dareemay jeeriga la qiimeeyo. Xaaladdan oo kale, waxay gaaraan 3-4 g (waxaa loo tixgeliyaa kuwo waaweyn), waxay leeyihiin qaab yar iyo wax yar oo ku dhejisan saldhigga. Waxa ku yaala jirida gaaban, oo aan ku qaban karin marka la tirtiro. Maqaarka berry waa dhuuban yahay oo timo fiican oo muuqaal ah oo ah hooska casaanka leh. Sida wakiillo badan oo badan oo jiir dareemey, "Chaavna" noocyada kala duwan ee "Tsarevna" waxay leeyihiin casiir leh, saxarad macaan oo leh dabeecad yar.
Geedka ubaxu wuxuu bilawdaa bartamaha bartamihii May, markaasna ururinta caleemaha bislaaday waxay bilaabi kartaa dhamaadka bisha Luulyo. Fruiting frauiting "Tsarevna" waxay soo baxdaa 2-3 sano kaddib marka la beerto, waxaana rajada guud ee noolaanshaha wakiillada kala duwan ay tahay 17 sano. Waa in la ogaadaa in "Tsarevna" waa noocyo jiilaal aad u adag oo jilicsan, taas oo isla markaaba u dulqaadanaysa abaarta.
Ma taqaanaa? Muuqaalka ugu muhiimsan ee kala duwan ee la tilmaamay waa inkasta oo ay berry ay u eg tahay johannesört, dhirta lafteedu waxay leedahay Qoyska Plum, taas oo ah sababta aysan u dhexgeli Karin jeeriga caadiga ah.
Waxay ku xiran tahay noocyo kala duwan oo leh naadir ama naadi dhexdhexaad ah. Doolarka ayaa ah mid yar yar. Caleemaha sanadlaha ah ee brownish-gray waa dhumuc dhexdhexaad ah iyo pubescence xooggan, halka laamiyooyinka duurjoogta ah ay qaro weyn yihiin, cureg iyo leeyihiin midab madow mugdi ah.
Burooyinkeeda miro ayaa yar yar, waxay tilmaameen dhinaca dambe waxayna si fiican u leexdeen laanta. Xaaladaha intooda badan, waxay ka kooban yihiin lafdhabarka lafaha ah ee qoryaha laba-jirka ah. Wakiilo kala duwan oo noocaan ah waxay leeyihiin caleemo cagaaran oo ah qaabka qaabka loo yaqaan "obovoid", mid dhexdhexaad ah ama weyn, oo si xoog leh loo dhajiyay, loona haystay laaluush qaadasho. Ubaxyo badan oo ubax ah ayaa ku yaala pedicle gaaban waxaana lagu rinjiyeeyaa midab madow.
Celcelis ahaan tirada miraha "Amurka" waa 2.7 g, oo la siiyay in miro-saarista laydhku yahay mid adag, maaha wax la yaab leh in miisaankoodu yahay cawska. Marka bislaado iyo ku shubtay, miraha kuwan ku haboon si wada jir ah. Hilibka ee berry waa mid aad u casiir leh iyo fibrous, burgundy-casaan midabka iyo dhadhan-macaan, dhadhan fiican. Tani waxay sababtaa, miraha kuwan waa kuwo weyn oo loogu talagalay isticmaalka cusub iyo farsamaynta farsamooyinka ee wax-soo-saarka, jahwareerka, jajabka, iwm.
Bisaylkiisa Berry wuxuu dhacaa bartamihii July, iyo dhalidda ugu badan ee baadiyaha waa 14.5 kg. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee "Amur" soo saaro heer sare oo adag ee jiilaalka, dhalidda sarreysa iyo miraha waaweyn oo dhadhan fiican leh. Faa'iidooyinka ay ku kobcayaan noocyada kala duwan waxaa ka mid ah tayada ilaalinta liita ee berry iyo qashinka dareeraha.
Wax qarsoodi ah maahan in daraasaddan dareemeysay sida johannesört sida nooc cusub oo ah geedo khudradeed oo ka soo baxa Khabarovsk, halkaas oo tiro badan oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah ee dhirta kuwan la daaqay. Waxay ku fiican yihiin xaaladaha cimilada ee Siberia, Ural, gobolka Moscow iyo suunka dhexda.
Dalalka ka mid ah dalagga maanta ayaa u taagan meelo kala duwan, taas oo loo yaqaan magaca "Khabarovsk". Waxa uu leeyahay ballaaran (miisaan illaa 3 g), miro wareegsan, kuwaas oo waxoogaa hoos udhigay cidhifyada. Waxay ku kala duwan yihiin midabka casaan iyo dhadhanka macaan, taas oo bannaanka u badan oo iyaga aad u jecel. Horeba sanadka labaad ee koritaanka scion, fruiting badan ayaa la xusay, inkastoo laga bilaabo daqiiqad ah beeritaanka seedling ilaa miro ugu horeysay, waxay caadi ahaan qaadataa waqti dheer.
"Pioneer" - mid ka mid ah noocyada ugu horreeya ee johnta dareemay, oo ay abuurtay saynisyahannada Machadka Cilmi-baarista Farsamada ee Farshaxanka ah ee Beeraha. Heerka dhirta dhirta waxaa la gaarsiiyaa 1.5-2 m. Laamaha waa dhuuban yihiin, laakiin waxay leeyihiin alwaax elastik ah, taas oo fududeyneysa inay la qabsadaan dalagyo badan. Caleemaha waxaa lagu gartaa qiyaas dhexdhexaad ah, qaabdhismeedka caleenta caleenta iyo midab qurux badan oo cagaaran. Taajku waa cufan yahay, si ballaadhan ayuu u dabacsan yahay wuxuuna ku daboolaa jilif midab leh. Sababta oo ah oval, calaamad ugu sareeya ee caleemaha, kala duwan tani waxay leedahay guryaha qurxinta wanaagsan, gaar ahaan tan iyo imaanshada caleemaha dayrta midabka midab ama jaale ah. Sidoo kale, mudada of fruiting, marka laamaha ku duugan yihiin midho dhalaalaya, sidoo kale waa gaar ahaan qurxinta. "Pioneer" ayaa si caadi ah u eegaya labadaba hal koox, iyo koox ahaan.
Ku dhowaad miraha wareegsan waa midab casaan ah, leh maqaar khafiif ah oo maqaarka adag ah oo adag in la jeexo, inkasta oo isla markiiba ay si fudud uga soocaan saxarka. Jidhka laftiisa waxaa lagu gartaa midab khafiif ah, casiir badan iyo dhadhan macaan. Waa in la ogaadaa in 'Pioneer' casiir ah oo gebi ahaanba la isku qurxiyo, lafta laftana si fiican ayay uga danbeeyaan saxarka. Caleenta noocyada kala duwan waxay gaari karaan tiro dhan 5 g. Ubaxkii geedkii kama sii wadi karo 7-10 maalmood, waxana uu billaabayaa in uu midho u dhasho sannadka saddexaad ama afaraad (goosashada waxay dhacdaa dhamaadka bisha Luulyo).
Kala duwan ee "virovskaya Ocean" waxaa matalaya geed wareeg ah oo gaadhaya 1.8 m. Waxa si ammaan ah loo yiraahdaa warshad is dulfuul leh oo dhexdhexaad ah. Caleemaha cagaaran waxay leeyihiin qaabab firfircoon oo ay ku jiraan gudaha hoose.
Caleemaha ovalaha ee kala duwan leh jidhka cas ee cufan iyo miisaankeedu yahay ilaa 3.6 g waa mid muhiim u ah soo jiidasho leh. Labadaba sanad iyo sanadlaha badan ayaa lagu gartaa caabbinta dhaxan sare, iyo ubaxyada ma cabsanayaan dhaxan guga.
"Virovskaya Ocean" waxa loola jeedaa noocyada abaarta u adkeysanaya ee aan u dulqaadanaynin biyo-qulqulo (oo leh xad-dhaaf ah qoyaan, ubax iyo miraha ayaa saameeya moniliosis). Intaa waxaa dheer, dhirta ayaa u adkaysata cocomycosis iyo si fiican u naqshadeeynaya nodules. Geedo la kariyay ayaa bilawday sannadka labaad, iyo shaybaarkooda oo leh xididadooda u gaarka ah sannadka saddexaad ama afaraad ka dib marka la beerto. Wareegga nolosha ee dhirta sida 17 sano ah.
Waa muhiim! Sida noocyo badan oo kala duwan oo ah jeeriga la jaray, "Ocean Virovskaya" waa warshad is-gashi oo u baahan in joogitaanka pollinators.
Cherry blossoms hoos dhacaan qeybtii labaad ee May, iyo midhaha u bislaadaan meel u dhow qeybtii labaad ee July. Beergooyska (xaaladaha wanaagsan, waa 9 kg duurka) waa mid aad u fiican oo lagu shaqeynayo iyo isticmaalka cusub.
Sida qaar ka mid ah wakiiladii hore ee john dareemay oo ka mid ah noocyada casriga ugu casriyeysan, "Natalie" waa geed xoog leh oo sii kordhaya oo gaadhaya 1.8 m. Waxay leedahay taako dhaadheer oo dhaadheer oo dhexdhexaad ah, oo ay sameysmeen geedo duurjoog ah, toosan, ciriiri iyo jajabyo leh lentil iftiin leh (marka la barbardhigo caleemaha sannadlaha ah waxay leeyihiin midab madow iyo pubescence yar).
Caleemaha duurka "Natalie" waa cagaar, qul-qulqulo, dhirbaaxo leh, caarad fiiqan iyo saldhig fiiqan. Dhinaca midig ee saxanka waxaa ku jira timo gaaban, dhinaca kalena dhinaca dushooda. Dhirta ubaxa dhirbaaxo-qaabeeya, oo leh qiyaas dhexdhexaad ah oo ah 2.5 cm (dhexroorka corolla). Waxay ka kooban tahay shan dabeecadood oo midab cad oo furan.
Sida qaybta ugu qiimaha badan ee baadiyaha - berry, miisaankooda celcelis ahaan wuxuu gaaraa 4 g, qaabkani waa ballaaran-oval oo leh sarajoog yar. Miraha waxaa lagu kala saaraa midab madow, maqaar gaaban oo gaaban iyo casaan, gumeysi, jilicsan iyo jilicsanaan leh. Midab casaanka ayaa sidoo kale caan ku ah nooca nooca jiiska ah. Ubax ee noocyo cherry dareemay "Natalie" waxay dhacdaa bilowga May, iyo Bisaylkiisa ee berry ku dhowaad bartamaha July. Dhammaan miraha oo dhan isla marba siman, taas oo macnaheedu yahay inaad ku soo aruurin kartid hal mar.
Waa muhiim! Beerahaas wuxuu u adkaysan karaa kookaha iyo qamriga oo si fiican u kleasteriosis, taas oo si weyn u fududeeysa daryeelka dhirta.
Geedka geedo lagu dubay ayaa bilawga sannadka labaad ka dib tallaalka, isla markaana lagu beeray isla markiiba fasalka saddexaad ama afaraad (ilaa 9 kg oo berry ah ayaa laga goyn karaa hal kaynta). Marka la barbardhigo noocyada hore ee jeeriga la dareemay, nolol maalmeedka wakiilada kala duwan ee Natali waa wax ka badan hal sano waana 18 sano.
Kala duwanaanta "Oriental" waxaa lagu matalaa duurka dhexdhexaad ah, oo dhererkiisu yahay 1.5 m waxaana lagu kala soocayaa qaabkoodu yar yahay iyo dhumuc dhexdhexaad ah. Laamiyaal badani - cawl, toosan, qaro weyn iyo miraayad ah, oo ay ku xiran yihiin cayayaanka iftiinka. Caleemaha sannadlaha ah, sida caadiga ah, waa bunni iyo gaabis ah. Caleemaha cagaaran waxay leeyihiin qaab yar oo leh caarada fiiqan iyo saldhig adag ama wareegsan. Qeybta saxanka caleen waa mid aad u ballaaran, waana timestans leh timo gaaban.
Dhexdhexaad ee ubax-qaabka dhirta ee dhirta waa 2.3 cm (dhexroorka of the cawl), iyo waxa laftiisa ka kooban dabiiciga casaan casaan. Miraha noocyada kala duwan ee "Vostochnaya" ayaa gaari doona tiro ballaaran oo 3.3 g ah waxaana lagu gartaa qaab muuqaal leh oo sarre leh oo saldhig leh iyo saldhig dhexe, oo ay ku xiran tahay hindiso qoto dheer. Berry burgundy berry ku dhegsan maqaarka, baroorta leh timo muuqata oo muuqata. Jidhka hooseeya waa midab casaan, cufan oo casiir leh. Casiirka sidoo kale waa casaan.
Ma taqaanaa? Dhagaxda miraha khudradda la dareemay ee kala duwan ee Natali waxay sameeyaan 6.6% wadarta guud ee midhaha oo si liidata ay u kala soocaan saxarka.
Cherry blossoms dhaco dhamaadka May, halka miraha si buuxda u bislaadaan badhtamaha July. Bushiska noocan oo kale ah waxaa lagu gartaa dhalid aad u sarreeya, tan 8.7 kg oo ah nooca berry ah ayaa laga goyn karaa hal warshad. Faa'iidooyinka kale ee Cherry Vostochnaya waxaa jira kala go 'miro yar oo qallalan iyo hardiness jiilaalka sare.
Marka la eego cabbirka, "Cherry Children" ayaa ah mid aan asal aheyn, maaddaama ay kor ugu kacayso 1.8 m dhererka, iyadoo lagu tilmaamayo qaab muuqaal ah iyo dhumuc dhexdhexaad ah oo taajka ah. Sida qoraallo badan oo hore ah, laamaha geedaha dilka ah waa midab-bunni midab leh, toosan oo leh lafil badan oo badan.
Caleemaha waa cagaar mugdi ah, oval oo leh calaamad fiiqan. Kaadida saldhigeedu waa gaaban yahay, gaaro 0.4 cm dhererka waxaana lagu dhejiyaa laba sharooto ah oo qumman, jaangooyo dheeri ah. Caleemaha caleemaha cad waa la qabadsiiyey. Beergooska waxaa matalaya miro ballaaran, miisaanka celceliska kaas oo inta badan gaaro 3.5 g (ugu badnaan - 4 g). Qaababka miraha way wareegsan yihiin, wax yar bayna ka soo baxaan dhinacyada, iyo dusha sare waxay ku jirtaa gaajo wanaagsan. Marka la eego midabka, kala duwanaantani kama duwana kuwa kale, maaddaama ay berry ay leeyihiin midab cas oo casaan ah iyo maqaar timo. Midabka suufka iyo casiirka sidoo kale waa casaan.
Time ubax - May 17-23, iyo Bisaylkiisa miro lagu xusay bartamihii July. Iyada oo hal baadiyaha waxaad ka qaadan kartaa ilaa 10 kg oo ah nooca berry ah. Dhadhaminta wanaagsan ee miraha, cabirkooda aadka u wanaagsan, dhalidda sare (badanaa ka sarreeya noocyada kale) iyo kala soocida semi-qallalan waxaa loo saari karaa qaybaha wanaagsan ee beerista jiirarka dareema ee "Carruurta" noocyada kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waa wax aan suurtagal ahayn in la xusuusto xaqiiqda ah in marka dalagga uu ka buuxsamo, miraha waxay noqon kartaa mid yar.
Sida aad arki karto, cherry felted waxay leedahay noocyo kala duwan oo kala duwan iyo sharaxaad of noocyo, kuwaas oo badan oo kuwaas oo aad u la mid ah midba midka kale, sababtoo ah taas oo mararka qaarkood waa mid aad u adag tahay in ay u weecdaan arrinta doorashada. Tilmaamayaasha ugu caansan ayaa ah fara badan oo ah fruiting iyo dabacsanaanta ee berry, sida marka la eego daryeelka, ku dhowaad dhammaan dhirta waxaa lagu kala saaraa shuruudaha la mid ah.